ZayYarHlaing: Profile: Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi won the Nobel Peace Prize in 1991But Burma was never far away from her thoughts.
သူငယ်ချင်း မှုံကြီး၇ဲ့ Blog ထဲကိုသွားလည်၇င်း ဖတ်မိလို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ကူးယူဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
Blog ad ကတော့ ...
မှုံကြီးေ၇ ... Beer တိုက်နော်၊ ဌဲ ဌဲ ။
ဟောဒီအောက်က A life in picture ကနေ ပိုမိုပြည့်စုံစွာသွားေ၇ာက်ကြည့်၇ှုနိူင်ပါတယ်။
P.S.ေ၇ွှနိူင်ငံကြီးမှာကတော့ဖြင့်ကြည့်လို့ ၇မည်ဟုမထင်မိပါကြောင်း .....
0 comments: to “ Profile: Aung San Suu Kyi ”